Nagu saabsan - Yantai Dongheng Makiinado Co., Ltd.
YANTAI DONGHENG MAKIINADDA CO., LTD
Waxaan nahay Worldwide
Yantai Dongheng Makiinado Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2010 waxayna noqotay booska hogaaminta ee mashiinada ku lifaaqan qodista si xawli ah.
Shirkaddayadu waxay dhaaftay ISO9001: 2015 iyo xaqiijinta CE. Waxaan nahay shirkad farsamo sare oo heer qaran ah oo leh xirfad, mid gaar ah iyo hal-abuurnimo. Shirkaddayadu waxay leedahay xuquuq madax-bannaan oo aqooneed. Ilaa hadda, waxaan helnay in ka badan 30 shati. Taasi waxay ka dhigeysaa Dongheng inuu noqdo hoggaamiye ka socda warshadaha mashiinnada dhismaha ee Shiinaha.
Yantai Dongheng Makiinado Co., Ltd. waxaa ka go'an inay R & D, soo saaridda iyo iibinta lifaaqa qodista ee dhismaha, mashiinada beeraha iyo dhirta.
KINGER meheradda ugu weyn waxay leedahay Mini Excavator, Earth auger, Log splitter, Log grapple, Saw madaxa, baaldi Mixer, Mashiinka Mashiinka, Trimmer Hedge, Chain trencher, Shearing Tree, Stump planer, Hydraulic dubbe, Quick coupler, Burinta xaaqidda iyo mashiinada kale ee dhismaha iyo lifaaqa
Alaabtayadu waxay qaadataa tiknoolajiyad sare oo cusub, oo lagu dabaqay waxyaabaha ugu fiican oo ay taageerayaan qalab kala duwan oo kormeer iyo tijaabooyin ah si loo hubiyo in tayada xasiloon iyo waxqabadka ay aad u fiican tahay
Intaa waxaa sii dheer, waxaa naloo xaqiijiyay alaab-qeybiye dahabi ah oo ku yaal Alibaba.We waxaan u geyn karnaa alaabada 100% dammaanadda waqtiga.
Waxaan bixinaa 24-saac taageero farsamo oo dhameystiran iyo adeegga khadka tooska ah.Waxaan ugu talagalnay inaan helno koox R&D noo gaar ah, haddii aad u baahato xoogaa caawimaad ah xagga farsamada, waxaan ku siin karnaa gacan caawimaad
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ka dib markii aad soo iibsatay alaabteena, fadlan ha ka waaban inaad nooga tagto fariin. Waan kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan ka dib hubinta.